काँग्रेस नेता कटवालले किन गरे पार्टी परित्यागको घोषणा ः कारण यस्तो छ ? - Halesi Khabar
काँग्रेस नेता कटवालले किन गरे पार्टी परित्यागको घोषणा ः कारण यस्तो छ ?
२२ भाद्र २०७८, मंगलवार १७:२८ ।
खोटाङ, नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व जिल्ला सचिव महेन्द्र कटवालले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन् । २०४७ सालदेखि पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा रहेका कटवालले राजिनामा पत्र लेख्दै पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन् ।
काँग्रेसजनमा स्वच्छ छवि बनाएका सबैको मन जित्न सफल नेता कटवालले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेलगत्तै जिल्लाभर हलचल ल्याएको छ । कटवालले पार्टीमात्र परित्याग गरेनन् स्थानीय तहमा आफू निर्वाचित वडा सदस्यसमेत त्याग गरेको घोषणा गरेका छन् । उनले पार्टी परित्यागको पत्र पार्टी कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर सामाजिक सञ्चाल फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन्, भने निर्वाचित वडा सदस्य पद जन्तेढुङ्गा गाउँलिका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर पोष्ट गरेका छन् ।
आबेग र उत्तेजनामा होइन, विवेक र अन्तरमनलाई साक्षी राखेर काँग्रेस साधारण, क्रियाशील सदस्यता परित्याग गरेको नेता कटवालले जनाएका छन् । उनले हलेसी खबरसगँ कुरा गर्दै भने, काँग्रेसको राजनीतिबाट मात्र हैन निर्वाचित वडा सदस्य पदबाट पनि राजीनामा दिएको छु अब कुन पार्टीमा लाग्छु भन्ने टुङ्गो नलागे पनि राजनीतिबाट चाँही सन्यास लिएको छैन ।
नेता कटवालले भने, राजनीतिमा हारजित भन्ने स्वभाविक हुन्छ तर, १२ वर्षदेखि आफू पार्टीबाट घेराबन्दीमा परेकाले पार्टी छोड्नु परेको हो । आफू जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा लड्ने पक्का पक्की भएर वडा सदस्य लडेको तर, जितेपछि पार्टीले अर्कै व्यक्ति समन्वयमा लड्न पठाएकोले पनि काँग्रेस छाेड्नु परेको उनको भनाइ छ । नेतृत्वको गतिविधिसँग नेता कार्यकर्ताहरु असन्तुष्ट रहेका छन् कटवालले भने अब खोटाङ काँग्रेसमा चाडै भूकम्प आउँछ ।
काँग्रेस नेता कटवालले पार्टीलाई लेखेको राजीनामा पत्र र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकालाई लेखेको सदस्य त्यागको पत्र जस्ताको तस्तै :